Yini Amakhono Athambile?
Amakhono aqinile ekulimeni kukhona umsebenzi oqondile. Udinga ukuqeqeshwa ukwenza imisebenzi ethile. Amakhono anzima akwenziwa epulazini nalapho enza umsebenzi wepulazi njengesibonelo, ukushayela imoto, ukusebenzisa ikhompiyutha, ukugoma izilwane futhi ngokujwayelekile, ukuthola umsebenzi wepulazi. Ufunda amakhono asebenzayo emisebenzini namakhono okhuluma ngawo ekuxoxweni komsebenzi endaweni yokulima.
Amakhono aphansi, ngakolunye uhlangothi, yizici zobuntu kanye namakhono okuxhumana.
Ngokomunye wabamabhizinisi abaphumelele kakhulu e-UK, abasebenzi bakaJames Caan bazobe bebuyiselwa emuva ngenxa yokungabi namakhono amancane.
Uthi amakhono abaluleke kunazo zonke yikhono lokuxhumana, ukusebenzisana, ukwenza izinqumo, ukuphathwa kwesikhathi kanye nesifiso sokulawula ikusasa lakho. Amakhono aphansi ahlanganisa nokushayela kwakho siqu nokugqugquzela, ikhono lakho lokuphatha isikhathi sakho futhi uthathe umthwalo wemfanelo. Ngokuxhumana, lapho ubhala ama-imeyili kanye ne-SMS, qinisekisa ukupela kahle, sebenzisa izimpawu zokubhala ezifanele futhi uqede umlayezo ngegama lakho.
La makghono athambile angenza umehluko phakathi kokuthi uzothola umsebenzi noma cha. Cishe bonke abafake isicelo somsebenzi bangase babe namakhono afanelekayo namakhono adingekayo, kodwa bangaki abazoba namakghono athambile azomenza abe ngcono kunabo bonke abanye?
Amakhono akho athambile yilokho okuzokwenza uhlukanise nakho konke okuhlukile futhi okuhlukile. Akukhona nje ukuvuka nokwenza umsebenzi, kodwa futhi ukugqugquzela abantu abasebenza nawe.